Theatre "I Tinder Ibhokisi" ikheli, abadlali kanye nokubuyekeza. Puppet Theatre "Flint", Mytishchi
Esifundeni Moscow edolobheni Mytischi kuyinto isakhiwo emangalisayo emgwaqeni Sharapovsky, ngawo kumane nje akunakwenzeka ukuba kudlule ngaphandle ukuliqaphela. Kulesi sigodlo fabulous pink nge imibhoshongo kwakhuphuka kanye fabulous ophahleni namaqhawe kuyinto enhle kakhulu upopayi show "Flint". Beautiful wokwakha endaweni ezungeze, repertoire ezithakazelisayo - akusiwona wonke esizoheha ababukeli abancane nabazali upopayi wabo Theater Mytishchi.
Ukudalwa kumiswa ngonodoli "Flint"
Abadali ethandwa ngonodoli namuhla, akungabazeki, inhloko yabangamashumi Mytishchi wesifunda Anatoly Astrahova, kanye nomqondisi futhi umlingisi UStanislava Zhelezkina. La madoda amabili ema ngasesivalweni Abathokozisa.
Ngasekuqaleni kwawo-90-yalolucwaningo A. Astrahov inikeza umlingisi kanye nomqondisi S. Jelieskin ukusungula eMoscow ngowokuqala professional ngonodoli (Mytishchi). Futhi, njengenhloko Mytishchi wesifunda, wathembisa ukugcwalisa futhi asinikeze konke okudingayo. Astrahov, ngokuyinhloko kuhlinzekelwe ikusasa egumbini yaseshashalazini, wasiza ekuthuthukisweni yayo nokwenza umsebenzi wokuvuselela izakhiwo, futhi kamuva nomthelela okuqukethwe kwaso.
Ngakho, ngo-September 16, 1992 yakhipha isimemezelo ngesisekelo netiyetha unodoli. Amalungiselelo aseqalile isizini yokuqala ezigcawugcawu. Mytishchinsky ngonodoli abadlali ngokukhethekile ezingemuva yayo okulungiselelwe ukudala ukuvulwa kuqala futhi ukusebenza.
Mayelana yaseshashalazini umculi
Kudlalwé kuqala ngokuthi isiphi isigaba sayo isakhiwo abuyiselwe owawuse ngo-1993, ku-2 Apreli. Izibukeli wabona show okuthiwa "The Tinder Ibhokisi", ogxile inganekwane by G. H. Andersena. Lokhu puppetry lithole yimpumelelo futhi accolades, okwakunginika yisisusa omuhle ngomsebenzi olunye ethiyetha asanda kuvulwa.
Wethule ukusebenza yakhe yokuqala, kwakusadingeka akunagama. Ngemva kombukiso, umbono eze ngokwalo. Uqambe Puppet Theatre "Flint", behlonipha kudlalwé play, elaqala umsebenzi okunye okudala. Kusukela wokuvula ethiyetha esiye ezingaphezu kuka 45 lokwentiwako, ngamunye zithandwa kakhulu. Abazali bayajabula ngokuthi bahambisa upopayi sikhombisa izingane zabo. "Flint" futhi udlala intsha ngisho nezilaleli omdala.
Imisebenzi ka ngonodoli: ukubuyekezwa izibukeli
Iqembu lika Mytishchi Puppet Theatre - ochwepheshe zangempela, ngubani njalo ekufuneni amafomu amasha, asesabi nokucwaninga lokudala, bazibekele imigomo emihle futhi ngokuqinisekile afinyelele kubo.
Puppet Theatre "I Tinder Ibhokisi" njalo ibambisane abaqondisi ehlukahlukene obuvelele Abahleli bomdanso. Enkundleni yayo kwenziwa kanye nokusebenzisa ukusebenza kwabo hhayi nje kuphela Ezigcwalisiwe Umculi Russia, kodwa futhi kwamanye amazwe amaningi. Ngokuvamile izibukeli ezimi ovakashele yaseshashalazini kanye wabukela ukunandisa kwakhe, kusale ikakhulukazi Izibuyekezo efudumele kakhulu futhi ube owakhayo.
Abantu abafana no-ndawo, futhi isakhiwo uqobo, futhi-ke, unodoli libonisa. Repertoire lababukeli yanelisekile, kukhona ezinye amazwana ezingavamile ukusebenza ngabanye. Njengokuthi "Tales ugogo Nura," lapho izilaleli wazizwa ongaziwa ngaphandle zokuziphatha eziyisisekelo, ngisho, kungaba yingozi ezinganeni. Kuyinto amazwana ezingavamile. omuhle Okuningi impendulo, sibonga ngokudala ukubukwa fabulous, ajabule futhi akusoze kwalibaleka.
umqondisi yobuciko yamabhayisikobho
Umuntu owasungula le nkundla upopayi e Umculi Mytischi Yabantu Russia Stanislav Jelieskin kuyinto umholi walo ongenambangi. Lokhu umlingisi abanamakhono futhi umqondisi ephethwe bazibonakalise bengamaKristu engaphezu kwengu-umhleli unamakhono, zenziwe futhi umholi iziphethe kahle.
Ngaphansi kokuqondisa Jelieskin upopayi show "Flint" nengxenye imincintiswano ehlukahlukene Russian nasemazweni angaphandle kanye nemikhosi, okuyinto eyaba umnikazi we imiklomelo eliphakeme futhi imiklomelo. Lowo msebenzi ezinezithelo UStanislava Zhelezkina wenza yaseshashalazini "Flint" owaziwa okudala yesehlakalo yasekhaya elimelela izwe emhlabeni wonke.
Ngokuphathelene nomsebenzi siqu lokudala laseStanislav Fedorovich, uye wasebenza njengoba kumdlali isimo amatiyetha ahlukahlukene: Tyumen, Volgograd, Yaroslavl, Krasnodar. Iningi nendima eyafezwa kubo (ezifana eduze 300) kufanele umphakathi wonke. S. Jelieskin - futhi umqondisi abanamakhono, wadala izidalwa mayelana 70 yeshashalazi yesifunda, kazwelonke, kanti ezinye angaphandle ahlukahlukene.
Umqondisi we nkundla "Flint" kuba imisebenzi zemfundo, nokuhleleka komphakathi. He is Initiator of namaphrojekthi eziningi ezithakazelisayo emhlabeni yaseshashalazini.
Abalingisi yamabhayisikobho "Flint"
Kuze kube manje, qembu ka ngonodoli kunabantu nanye, kuhlanganise Abaculi Ezigcwalisiwe Russia nesifunda eMoscow. umqondisi Esezidonsile yamabhayisikobho Stanislav Jelieskin - Umculi Yabantu yeRussia, naye egijima umkakhe - Umculi Ezigcwalisiwe Russia Natalia Kotljarova.
Afakwe qembu njengoba Umculi Ezigcwalisiwe Russia Alexei Guschuk nabaculi ahlonishwe YaseMoscow Region Irina Shalamov, u-Alexander Edukov Tatiana Gasimov, Sergey Sinev.
Eceleni abadlali abanekhono ukusebenza esizukulwaneni esisha: yaseshashalazini abadlali Maria Kuznetsova, Elena Biryukova, u-Olga, Sergey Amosov Kothari. Ithimba Talented kudala emangalisayo inganekwane izingane kanye nabantu abadala, futhi ukumema shí ke ikhanda lakhe, ngokuvakashela Mytishchi Puppet Theatre. Abalingisi ngaphansi kokuqondisa Jelieskin - laba yibo abantu abasesikhundleni uthando yini nalokho athi uyakukholelwa, yaseshashalazini nabantu abalawulwa.
Imikhosi kanye nemiklomelo Theatre
Engakabi yayo, "Flint" ngonodoli engaphezu kwekhulu izikhathi, baba umhlanganyeli of imikhosi ehlukahlukene, kokubili Russian nasemazweni angaphandle. Ngamunye wabo uye wakwazi ethiyetha ngokwanele ukumela isifunda sabo, izwe abazalwa futhi uthole umvuzo eziphathekayo. Zonke impumelelo ngeke uhlu, kodwa uzabizwa ngokuthi ebaluleke kakhulu kubo.
Ungazibona yini ngeso lengqondo ukuthi "Flint" (Mytishchi Theatre) engumnikazi 17 Grand Prix emikhosini international? Futhi, le nkundla upopayi - winner futhi winner i-National Theater Award "Isivuvu Golden".
"Flint" waklonyeliswa Special amajaji Prize International Theatre Forum "Golden Knight" - "Diploma Golden" futhi "Ukuze uthole samuntu acacile kolimi classical yesimanjemanje." On Federal II umkhosi Sochi, kodwa leyo ndawo yeshashalazi ithole Bronze umklomelo "THEATER Olympus" ku ukuqokwa "Kuhle Theatre".
Puppet Theatre "I Tinder Ibhokisi" namuhla
Namuhla abasebenzi lesikhungo siqhubeke ngenkuthalo ukuthuthukisa izinga yamasiko izakhamizi abasha komuzi Mitischi. Puppet Theatre "Flint" washintsha ngokuyisimangaliso phakathi ukhona. Kuze kube manje, i-isakhiwo amazing nge endaweni ezimangalisayo, ne ngisho kuzenze zibathinte nakakhulu umhlobiso ingaphakathi. Lona omunye the best ezikhangayo Mytischi, ibhizinisi ikhadi layo elikhulu.
Olwenziwe ngemva ukulungiswa ngo-2004 anda ehholo, wokubawa abantu bayisekele olwesimanje, lakha ihholo ithikithi. Futhi esitezi sokuqala siye wakha yesibili. Manje-ke ibekwe kwelinye igumbi elincane, namahhovisi, kanye nesigaxa isidlo.
Kuyo yonke le minyaka ethiyetha "Flint" got siqu Museum yayo encane. Lapha, izilaleli ungabona onodoli ezingavamile izinhlamvu ukusuka kudlala, okuyinto manje kakade archive, kanye ukuchayeka isigcawu ngabanye yamakhonsathi, evezwa repertoire zamanje. Izitolo Museum ngaphezulu diploma, imiklomelo, imincintiswano imikhosi, izipho esiyisikhumbuzo ukuthi banikezwe ukuba unodoli yeshashalazi kwamanye amazwe. Omunye ziphephile eyigugu kakhulu kuyinto unodoli uMarta Tsifrinovich, Umculi Yabantu yeRussia. Nale unodoli, wenza ku "kwamalambu aluhlaza" ngezinombolo yayo pop. Ngakho "I Tinder Ibhokisi" Theatre Namuhla, siziqhenye, into ukukhombisa nento siqhoshe. Akumangazi ukuthi omunye ekuholeni Russian unodoli yeshashalazi.
I repertoire yamabhayisikobho "Flint"
Uhlu ukusebenza kufakwe repertoire yamabhayisikobho unodoli, a ebanzi kunalokho. I repertoire lihlukaniswe by lobudala: izingane kusukela eminyakeni 4 ubudala, 5-futhi, kusukela kwabaneminyaka engamashumi 6-7 kanye repertoire abadala. Ukuze repertoire kulencane enkulu. Kufeza ezifana:
"Nonogwaja, fox kanye Iqhude";
"Kubi, bunny ezimbi";
"Tales ugogo," kanye nabanye abaningi.
Izingane ezindadlana ungabukela "I Tinder Ibhokisi", "Cinderella", "Little Longnose", "I-Scarlet Imbali", "Star Boy" nabanye.
Qaphelani bantu abadala ethulwa ukusebenza ezifana:
"Njengoba kwakulindelwe Sinbad";
"Serenade" kanye nezinye ukusebenza ezimbalwa ezithakazelisayo.
Ngonodoli: poster ngo-December 2016
Njengoba kakade, "Flint" (Mytishchi Theatre) uhlela ukusebenza hhayi kuphela izingane nentsha, kodwa futhi unalo kulungiselelwa abadala. Ungomunye ambalwa Russian ngonodoli, okuyinto has a repertoire unomphela ngoba abantu asebebadala. Mytishchi yaseshashalazini ngenkuthalo ukuphishekela elizimisele popularize ethiyetha upopayi abadala.
Uma ufuna bajwayelane repertoire kukaDisemba kulo nyaka, ukukwazisa ukuthi uzokwazi ukuvakashela ukusebenza elandelayo. Kubantu abadala ehholo elikhulu izoba Premiere play ngokuthi "uthando yamaGreki namaRoma." Izingane iminyaka esuka kwemine ubudala noma ngaphezulu uzokwazi ukubona ukusebenza ezifana "zimangaliso", "The Legend of the Heart Good", "I Tinder Ibhokisi", "Little Red Riding Hood", "Terem ekamelweni sika".
Ngo-Eva kaNcibijane qiniseka ukuthi uvakashela nezingane netiyetha unodoli. Poster lesi sikhathi futhi we ukumelwa okunjalo, njengoba "Trouble Christmas" okuzokwenziwa ohanjelwa Amaqhawe ethandwa inganekwane "Masha kanye Bear", futhi yebo, Eqhweni Maiden kanye Santa Claus.
Njengengxenye ukusebenza kaNcibijane enkundleni izobanjwa mhla ukusebenza zezingane of "The Frog Princess". Konke lokhu ngeke kwenzeke Disemba 21, 2016 ku-Januwari 6, 2017. Okuningi ukwaziswa okuningiliziwe ungathola ibhokisi ehhovisi zale nkundla.
Ulwazi izindleko amathikithi
Uma ungazange wavakashela yaseshashalazini "Flint" e Mytischi, kodwa unesithakazelo lolu lwazi, qiniseka ukuthi uvakashela maduze. Izindleko ithikithi ingane - ruble 250, futhi ukusebenza ngenxa yobudala engu-14 nangaphezulu izobiza ruble 400 450. Amathikithi ungakwazi ukuthenga ngokuqondile hhayi kuphela ibhokisi ehhovisi yamabhayisikobho, kodwa futhi oda online. Kube yebo, bathathile isicelo ngokuhlanganyela.
Theatre "Mimigranty" - iqembu eyingqayizivele isimo sobuso nokushukuma komzimba
"Isobho of the canary" (a ukusebenza): ukubuyekezwa, abadlali, sakhiwo.
State Puppet Theatre, Rostov-on-Don: incazelo kanye nokubuyekeza
Kungani abadlali ukugwema igama elithi "Macbeth"?
Perm Puppet Theatre: umlando, repertoire, qembu, ukubuyekezwa
LaseChekhov Theatre (eTaganrog): umlando, repertoire, qembu
Funny esikoleni izigcawu ka-September 1 kanye Prom
Izindondo wase-USSR: "Medal of umama", "umama Heroine", "nal Inkazimulo"
Kuyini hybrid imoto? Okuzuzisa kakhulu Izimoto Hybrid
Aries futhi Aquarius - somshado kwedivayisi, kothando lokulala lomuntu
Indlela ukwelapha umphimbo obuhlungu ngaphandle kwemiphumela ngoba impilo
Umuthi 'Ampisid'. Yokusetshenziswa